Nolosha waa la saadaalin karin iyo ma garan kartid marka aad hesho qaar ka mid ah shil lama filaan ah. Weligaa ma la qaracan marka aad telefoon ama kiniin la xado, lunto ama jabto, iyo dhammaan macluumaadka ku yaal tageen? Weligaa ma dareentay Nidaamooda in aad ugama dhigin gurmad ah Android ka hor soo celinta goobaha default warshad ama soo afjarno Android? Si looga fogaado Aafooyinka dhaca sida, waxaa muhiim ah in aad ka heli weyn Android gurmad software in ay sii xogta aad Android ammaan ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin ugu sareysa 5 Android gurmad software.
Haddii aad rabto in qaar ka mid ah barnaamijyadooda gurmad, waxaad ka akhrisan kartaa - Best 5 barnaamijyadooda gurmad Android .
Wondershare MobileGo for Android waa hal-stop gurmad software ah ee Android. Waxay kaa caawinaysaa inaad gurmad oo dhan ama xogta Android loo doortay in ay computer. Mar kasta oo aad u baahan tahay, in aad dib u soo ceshano karaan gurmad ah oo soo celiyo si aad telefoon Android ama kiniin.
Chine ee kaabta iyo Guda xogta, xiriirada, sawiro, videos, SMS, music iyo wac mar.
Xulo marka gurmad xiriirada, SMS, videos, barnaamijyadooda, music, sawiro iyo document files si kombiyuutarka.
Ceshano file gurmad abuuray by MobileGo ah una soo celiso qalabka Android aad.
Taageer Google, Samsung, Sony, HTC, LG, Huawei, Acer, ZTE, iwm
App gurmad xogta lagu helaa oo keliya version Windows ah in muddo ah.
MOBILedit si toos ah u taageerto ilaa telefoonka aad Android. Waxa badbaadiyay gurmad ah ee aad telefoon inta aad u daalacanaya dhex software this. The files gurmad waxaa laga heli karaa goor dambe oo folder offline ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa xirmaan mobile aad u PC iyo bilowdo MAARAYNTA desktop mobile dhex keyboard PC.
Si toos ah gurmad inta aad Author xogta aad.
Kaabta waxaa loo sameeyey in lagu kaydiyo Internet adeegyada daruur ku salaysan.
La jaan qaada kasta taleefanka.
Ma aha lacag la'aan ah.
Mobogenie ka mid yahay gurmad software waxtar leh ee telefoonada Android. Waxa aad ka caawisaa ammaan oo dhan xogta ka telefoonka aad Android inay PC iyo aad u soo celin kartaa, marka aad lumiso telefoonka ama ka heli mid cusub. Software waa fududahay in la isticmaalo.
Si fudud gurmad xiriirada, barnaamijyadooda, fariimaha, muusig iyo cajallado fiidyow.
Ay ku guuldareysato inay Guda gurmad wac, jadwalka taariikhda, playlist info.
Mobisynapse waa Android gurmad phone software, oo midaynaysa la Muuqaalka muuqan. Waxaad awoodi kartaa barnaamijyadooda gurmad, SMS iyo xiriirada ka telefoonka aad Android galay PC la software this.
In loo sahlo in ay SMS gurmad, barnaamijyadooda iyo xiriirada.
Aan u ogolaan in ay gurmad music, videos, sawiro, jadwalka taariikhda, abuse yeedha.
MoboRobo waa gurmad kale software Android u PC. Waxay kuu ogolaanaysaa gurmad ka kooban oo ay ku jiraan Guda wac, xiriirada, fariimaha, sawirada, music, files iyo xitaa barnaamijyadooda. Waxa kaloo ay bixiyaan si degdeg ah oo xog ammaan celin xarunta. Sidaas darteed, haddii aad si qalad ah laga badiyay telefoonka, macluumaadka aad weli tahay mid amaan ah oo ku saabsan PC.
Call ee kaabta abuse, xiriirada, fariimaha, sawirada, files iyo barnaamijyadooda si deg deg ah.
Music, videos, qoraal, note, jadwalka iyo ka badan oo aan la taageeray kartaa.
3 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Android
Maamul Apps on Your Android Phone
> Resource > Android > Top 5 Android kaabta Software